Dowladda Britain Oo Saldhig Melleteri Ka Furatay Wadanka Baxreyn.
Monday April 09, 2018 - 09:47:07 in Wararka by Super Admin
Dowladda Ingiriiska ayaa saldhig Military ka furanaysa waddanka baxreyn taas oo noqoneysa Saldhigii ugu horreeyey oo ay bariga dhexe ka furo mudo ku dhow 40 sano kadib.
Xafladda furitaanka saldhigan Military ayaa ka dhacday laba Maalin ka hor dekedda Salmaan Dooq oo ku taala meel aan ka fogeyn goobta laga dhisay, waxaana goob joog ka ahaa saraakiil ka socda Boqortoyada Ingiriiska iyo dhaxal Sugaha Boqortooyada Baxreyn Salmaan Bin Xamad Aala Khalifah.
Saldhigag Military oo loogu Magacdaray JAFIIR ayaa loogu tala galay inuu Hoy u noqdo in kabadan 500 oo askari, kuwaas oo isugu jira Ciidanka Badda, Kuwa howlgallada Gaarka ah iyo waliba diyaaradaha Military oo ka duuli doona.
Masuuliyiin katirsan Xukuumada Biritain ayaa sheegay in Saldhigani noqonayo kii ugu horreeyey oo joogto ah kaas oo ay ku yeeshaan Bariga Qanaatka Suweys oo laf dhabar muhiima u ah Ganacsiga adduunka tan iyo wixii ka danbeeyey 1971.
Sidoo kale waxa ay sheegeen in shaqada saldhigani noqon doonto, sugida amniga Maraakiibta isticmaasha Badda si looga hortago Burcad Badeedda, adkeynta Qaanuunka u degsan isticmaalka Baddaha caalamiga ah, Ka hor tagga iyo Ladagaalanka Weerarada waxa Argagixisada loogu yeero iyo Nabad Gelinta Dhaqdhaqaqa ganacsi ee dunida.
Saldhiggan ayaa dowlada ingiriiska jaanis weyn u siinaya in ay ciidankooda ku fidiyaan Wadamada Dhaca Bariga dhexe oo reer galbeedku ugu jiraan halgan xooggan sidii mid kastaa siyaasadiisa uga dhaqan galin lahaa, lacagahana ay uga dhuran lahaayeen.
Waxaana xusid mudan in ciidanka Mareykanka ay kuleeyihiin waddanka Baxreyn saldhig military oo weyn kaas oo ay ka howl galaan Taliska Ciidanka Mareykanka Qeybtiisa 5 aad.
Saldhigan ayey ciidamada ingiriiska horey u isticmaali jireen sanadihii 1935tii intii uusan bilaaban dagaalkii labaad ee adduunka inkastoo dib laga xeray, waxayna labada dowladood isku af garteen in dib loo furo sanadii 2014, dhisimihiisana waxa uu biloowday 2015, ugu danbeyna waxaa albaabadiisa la furay 5 Feb 2018 oo ku beegneyd 2 maalin ka hor.
Saldhigga Melleteri ee kaliya oo dowladda UK ku laheyd mandiqadda Bariga dhexe loo bixiyay ayaa kuyaal wadanka Cummaan oo taariikh usoo lahaa isbaheysiga uu laleeyahay Boqortooyada London.